ကျွန်ုပ်သိသမျှ MLM (Multi-Level Marketing) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ကျွန်ုပ်သိသမျှ MLM (Multi-Level Marketing)
Posted by ムラカミ on Dec 6, 2011 in Business & Economics, Know-How, DIY, Myanmar Gazette | 35 comments
Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa ...
ကျွန်ုပ်သည် ဤ ဆောင်းပါးအား ရေးသင့်၏ မရေးသင့်၏ အကြိမ်ကြိမ် အဖန်ဖန်စဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးမှ
နောက်ဆုံးတွင် ရေးသင့်၏ ဟူသောဘက်မှ လွန်စွာ အလေးသာသွားသည့် အားလျော်စွာ တတ်စွမ်းသမျှ
ရေးသားပြုစုအပ်ပေသတည်း။အကြောင်းအရာပါ အချက်အလက်များ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အယူအဆများ
မှားယွင်းချွတ်ချော်ခဲ့သည်ရှိသော် ကျွန်ုပ်တွင် အပြည့်အ၀ တာဝန်ရှိသဖြင့် ကျွန်ုပ်အား သဘောရှိသလို
ဝေဖန် ထောက်ပြ နိုင်ပါသည် စာရှု သူ ချစ် မိတ်ဆွေ ခင်ဗျား။
Multi-level marketing (MLM) ဆိုရာဝယ်  marketing strategy တစ်ခုသာဖြစ်၏။အနှီ စနစ်သည်ကား
သုံးသပ်ရန် သာဖြစ်ပေသည်။ အနှီစနစ်ဖြင့် စီးပွားလုပ်ကိုင်ကြသောပြည်တွင်းပြည်ပမှာ ကုမ္ပဏီ ကြီး ငယ် များ
၄င်းတို့နှင့် ပတ်သတ်ဆက်နွယ်သူများအား ဝေဖန် တိုက်ခိုက်လိုခြင်း ကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချလိုခြင်း အလျင်း မရှိဟု
ဦးစွာပဏာမ မွက်ကြားပါရစေ။ထို့အတူ ဘယ် ကုမ္ပဏီကတော့ ဘယ်သို့ ဆိုတာမျိုး ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အစွဲ
(အမည်နာမ အပြည့်အစုံ)နှင့်လည်း ရေးသားမည် မဟုတ်ကြောင်း ထပ်လောင်း အသိပေးပါ၏။ စာရှုသူ
ချစ်မိတ်ဆွေအား ဤဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်တည်းဖြင့် တထိုင်တည်း ပြည့်စုံစေ့ငုစွာ ဖတ်ရှုစေချင်သော
ကျွန်ုပ်စေတနာကြောင့် ဆောင်းပါးရှည်သွားလျင်လည်း သီးခံ ခွင့်လွှတ်ပေးပါရန်ဤနေရာမှ ချစ်ခင်သောစိတ်ထား
MLM စနစ်၏ သမိုင်းကို တူးဆွရလျင်ဖြင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ရှိ California Vitamin Company (Nutrilite)မှ
အစပြုခဲ့သည်ဟု ဆို၏။ distributors ဟု ဆိုအပ်သော လုပ်ခလစာ မခံစားသော ဖြန့်ချိရေးသမားများ ၏
ကွန်ယက် သဖွယ် စုစည်းမှု ဟု သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်၏။  commission ဟု သမုတ်အပ်သော ရောင်းရငွေအပေါ်မှ
အကျိုးဆောင်ခ ရာခိုင်နှုန်းတခု ဖြင့် ရပ်တည်သည်ဟု အလွယ်လေးဆိုနိုင်ပေသည်။ MLM ၏ သရုပ် ကိုပေါ်လွင်အောင်
Fig 1.1 8 Balls Model
အဆိုပါmodel အား လေယာဉ်ပျံ တစ်စီး၏ ဖွဲ့စည်းပုံမျိုး ဆက်လက်ရှင်းလင်းအံ့။ pyramid ၏ ထိပ်ဆုံး ရှိ ဘောလုံးအား
လေယာဉ်မှူး Pilot အဖြစ် လည်းကောင်း။ ဒုတိယတန်း ရှိ ဘောလုံး၂ လုံးမှာ မူ Co-Pilot ၂ဦး အဖြစ် လည်းကောင်း။
တတိယတန်းရှိ ဘောလုံး ၄လုံးမှာ လေယာဉ်မောင်မယ်များ Crew အဖြစ်လည်းကောင်း။
စတုတ္ထ(၀ါ) အောက်ဆုံးတန်းရှိ ဘောလုံး၈လုံးကိုမူ ခရီးသည် passengers အဖြစ်လည်းကောင်း မှတ်ယူပေးကြပါကုန်။
ခရီးသည် တစ်ဦးသည် အဆိုပါ ခရီးစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့်ရအောင် $1000 ပေးသွင်းရသည်ဆိုအံ့။ စုစုပေါင်း ခရီးသည် ၈ဦး
$8000 ဖြစ်၏။ ထိုငွေသားကို Captain က ရယူလေသည်။ Theory အရ Captain အကုန်ယူသည်ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်ရာ
လက်တွေ့ MLMများတွင်မူ Co-Pilots များနှင့် Crewသားများ ခွဲဝေယူကြသည် ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပေသည်။
သို့သော် သေချာသည်မှာတော့ အများစု ကို Captain ကယူ၏။
ထို့နောက် Captain သည်လေယာဉ်ကို စွန့်ခွာပေသည်။ (ဆက်လက် ငွေကြေးခံစားခွင့်မယူ တော့သည် ဟု ဆိုလိုသည်)။
ထိုအခါ pyramid ၏ ကျန်လူများ promotion ရ၏ ။ Co-pilots များသည် သီးခြား Captain ၂ဦးဖြစ်သွားပြီး Passengers
များပင် Crew အဆင့်ရောက်၏။Pyramid လည်း ၂ခြမ်းဖြစ်သွားလေပြီး သီးခြား ခရီးသယ် အသစ် ၈ယောက်စီ ပါဝင်ခွင့်ရ၏။
MLM ၏ အားသာချက်များ ကို ဦးစွာဖော်ပြအံ့။ mainstream channels များ အသုံးမပြုသောကြောင့် ကြော်ငြာခ စရိတ် ၊
distribution စရိတ်၊Branding cost ၊ထို့ပြင် အရောင်း ဆိုင်များ ဖွင့်လှစ်ရသော ၀န်ထမ်းငှားရသော အစရှိသည့်
အထွေထွေ စားရိတ်များ လွန်စွာ သက်သာ၏။ သာမန်စီးပွားရေး အတွေးအမြင်နှင့် ပြောရလျင် ထိုသို့စရိတ်စက သက်သာ
သောကြောင့် ဈေးကွက်တွင်း အခြား နှိုင်းယှဉ်ပစ္စည်း (competitors' products) ထက်စာလျင် ချိုသာသောဈေးဖြင့်
ဖြန့်ချိ ရောင်းချ နေသည် ဟု မြင်နိုင်ပေသည်။ သို့ရာတွင် လက်တွေ့ဝယ် ထိုသို့ မဟုတ်သည်ကို တွေ့ရှိရပေမည်။
MLM အများစုသည် pharmaceutical products ဟုဆိုအပ်သော ဆေးဝါးနှင့် အလှကုန်တို့၏ ကြားကျသော
ပစ္စည်းများကို ရောင်းဝယ်သမှုပြုကြလေသည်။ ဈေးကွက်တွင်းရှိ သာမန်လူသုံးကုန် အလှကုန် တို့ထက် သာလွန်
ကောင်းမွန်သော(သာလွန်ကောင်းမွန်သဖွယ်ရှိသော) ပစ္စည်းများ လည်းရောင်းတတ်ကြ၏။ Value-added လုပ်ထားသော
ထုတ်ကုန်များဖြစ်ရာ သာမန်ပစ္စည်းတို့ နှင့်ယှဉ်ပါက ဈေးကြီး၏။ ဖြည့်ဆည်းထားသော Value ၏ တန်ဖိုးထက်ပင်
Cost ကျသင့်မှု များစွာ ပိုမိုသော MLMများ ပင်ရှိသေးသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် pyramid စနစ်ကို အသက်ဆက်စေရန်
လောင်စာ ဖြည့်ဆည်း ရသည့် သဘောနှယ် အဆိုပါလောင်စာကို စားသုံးသူထံမှ ကောက်ခံသည့် သဘောပေတည်း။
အထက်ပါ အတိုင်း ဆိုရသော် စားသုံးသူအတွက်  အခြား ပစ္စည်းများထက် သာလွန်ကောင်းမွန်သော ထုတ်ကုန်များကို
ဖြန့်ချိရောင်းချပေးနေသော၊ (စားသုံးသူပင်လျင် ဖြန့်ချိသူဖြစ်ခွင့်ရှိသော) member များ အကျိုးများသော အဆိုပါ
စနစ်သည် ပြည့်စုံကောင်းမွန်သော Marketing Strategy တစ်ခုဟု စာရှုသူ ယူဆပါသလား? ဤမျှ ကောင်းမွန်နေလျင်
အဘယ့်ကြောင့် အလုံးစုံသော ကုမ္ပဏီ ကြီးငယ်တို့သည် အနှီ စနစ်ကို မသုံးစွဲပါသနည်း ? ထို မေးခွန်းများ၏ အဖြေအတွက်
ဤ စနစ်ကိုပင် အခြားသော model တခု သုံးကာ ဆွေးနွေး တင်ပြပါအံ့။ ခြေ ၆ချောင်း ရှိသော ပင့်ကူသဖွယ် မြင်ကြည့်ပေး
စေလိုပါသည်။ ခေါင်း၁လုံး ၆ခု နှုန်းဖြင့် hierarchy အဆင့်ဆင့် ပွားလာသည် ဟု မြင်ကြည့်ပေးပါကုန်။ ၁-၆-၃၆-၂၁၆-၁၂၉၆
စသည့် member ဦးရေ နှုန်းဖြင့် level တဆင့်ချင်းစီ ခွဲထွက်သည်ဟု ဆိုပါချိမ့်။ Level 12 အရောက်တွင် member ဦးရေမှာ
2,176,782,336 ဦး ဖြစ်နေပြီး ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ၃ပုံ၁ပုံ နီးနီး ဖြစ်နေရာ အဆိုပါ MLM မှ ကမ္ဘာမှာ လူ၃ဦးလျင် ၁ဦး member
ဖြစ်ရမည် ဟု ဆိုလိုနေကြောင်း တွေ့နိုင်ပေသည်။Level 13 တွင် 13,060,694,016 ဖြင့် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ၂ဆနီးပါး
ဖြစ်သွားပြီး ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာ မရှိသော model အဖြစ်ရောက်ရှိသွားပေသည်။
တဖန် မြန်မာပြည်အနေအထားဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြအံ့။ Level 10မှာပင် member ဦးရေ သန်း၆၀ ပြည့် သွားပြီ ဖြစ်ရာ
တိုင်းပြည်ရှိ လူတိုင်း ဖြန့်ချိသူချည်းသာ ဖြစ်ကုန်တော့လေသည်(မည်သူ့ကိုရောင်းမည်နည်း?)။Level 8 ကို တဖန်
ပြန် ငဲ့ကြည့်ပါဦး ချစ်မိတ်ဆွေ။ Member ဦးရေ 1,679,616 ဖြစ်ပါသည်။ အကြမ်းဖျင်း လူ၁သန်းခွဲ member ဆိုပါစို့
Logic အရ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိသော အနေအထား ဖြစ်သော်လည်း probability အရ တွေးခေါ်ကြည့် ပါအံ့။
ဆင်းရဲသော ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းပြည် အတွက်မူ အထက်မှာ ဆိုခဲ့သော ဈေးကြီးသည့် Value-added  ပစ္စည်းများကို ကျန်
လူဦးရေ ၅၈.၅သန်းက (လူဦးရေ စုစုပေါင်း သန်း ၆၀ ဆိုပါက)၀ယ်ယူ နိုင်ပါမည်လော? Target customer သည်
မည်မျှ ရှိပါသလဲ။ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော လူတန်းစား အလွှာ ခွဲခြားမှု Pyramid ကိုကြည့်ပါလော့ မိတ်ဆွေ။
Buttom line ကို target မထားသော Business model ဖြစ်လို့ နေပေသည်။ အရပ်သုံးစကားနှင့်ပြောရလျင် လူတကာ
၀ယ်မသုံးနိုင်သော(၀ါ) လူ့မလိုင်လွှာသုံး ပစ္စည်းများသာ ရောင်းချသော လုပ်ငန်း မည်၏။ ထိုအခါ ဘာဖြစ်ပါသနည်း?
8 Balls Model အရ ဆိုပါလျင် လူဦးရေ အများစု ရှိနေသော အောက်ဆုံး Level များမှာ promotion ဖြစ်ခွင့်မရ
(တစ်နည်း) Membership တွင် ကုန်ကျရင်းနှီး ထားသလောက် အကျိုးအမြတ် မရသည့်အခါ စွန့်ခွာကြတော့၏။
ဆက်လက် ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်ခြင်း မရှိတော့ဘဲ လက်ရှိ အရှုံးပမာဏဖြင့်ပင် လက်စသတ်ကာ အခြားလုပ်ငန်း
ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင် သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ထိုအခါ အထက်မှ အဆင့်များမှလည်း Pilot မှ Co-pilotသို့ Crewမှ Passengerသို့
အဆင့်ဆင့် ရာထူးကျ demotion ကုန်တော့လည်။ ထိုအခါ ထွက်လေ-ကျလေ-ကျလေ-ထွက်လေနှင့် MLM စနစ်
ပြိုလဲတော့ လေသတည်း။ စီးပွားရေးအရမူ ဤသည်ကို Domino Effect ဟုတင်စားလေသည်။ ဆင်လျက်ထောင်ထားသော
ဒိုးဇက်ပြားများ တစ်ခုလဲသည်နှင့် အခြား တစ်ခုကို တိုက်ချ လှဲပစ်တတ်ခြင်းပေ။
Marketing အယူအဆ အရ တင်ပြဆွေးနွေးအံ့။ ဈေးကွက်တို့၏ သဘောသည် တချိန်တွင် saturate ဖြစ်တတ်သည်။
ဓါတုဗေဒသဘောအရ ပင်လျင် ပြည့်ဝပျော်ရည် saturated solution ထဲသည့် ထပ်မံ ဖျော်သွင်း လို့မရသည့် သဘော
ကိုလည်းဆောင်ပေသည်။ လက်ရှိ ကျင်လည်နေသည့် Market ၏ Lifecycle ကို သရုတ်ခွဲ၍ မြင်တတ်ရန် လိုပေသည်။
ဤနေရာဝယ် မြင်သာအောင် Product ၃မျိုးခန့် သုံးကာ ဆွေးနွေးတင်ပြခွင့်ပြုပါ။ လက်နှိပ်စက် ဟူသော product
အမျိုးအစားရှိသော market သည် decline ဖြစ်နေသော market ဟု ဆိုလျင် ငြင်းမည်လား မိတ်ဆွေ။ ဒါဆိုလျင် Cell phone
တွေကရော? ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတွင် cell phone ပင်လျင် Mature market ဖြစ်၍နေပေသည်။
ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျနေသော(၀ါ) လူတိုင်း Cell Phone မကိုင်နိုင်သေးသော ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းပြည်တွင်သာ Growing Market
ဟု ပြောနိုင်ပေသည်။ နောက်ဆုံးသော ဥပမာ ကတော့ Maturity ကိုရောက်နေသည့် Market အမျိုးအစား အဖြစ် ဆပ်ပြာ
ဟု ညွှန်းချင်ပါသည်။ ဆပ်ပြာမတိုက်သော လူရိုင်းမျိုးနွယ်အသစ်များ ရိုးမတောင်တန်းများပေါ်မှ မပေါ်ထွန်းမချင်း
လုံးဝ Growth  လည်းမရှိ (ထို့ပြင်) ဆပ်ပြာ မတိုက်ဘဲနေလို့လည်း မဖြစ်။တခြားလည်း အစားထိုးသုံးစရာ မရှိသော
Decline လည်းမရှိသော Market အမျိုး အစားဟုဆိုနိုင်၏ ။ တိုတိုနှင့် ရှင်းရှင်း ပြောရလျင် Market Life Cycle အရ
Market သည် Mature Stage ရောက်သွားပါက ထို MLM ဇာတ်သိမ်းခန်း နီးလာပြီ ဟု ပြောချင်ပါသည်။
The Times ၏ အလို အရမူ Member ဦးရေ 33,000 အတွင်း လူ 90 သာ လုံလောက်သော ၀င်ငွေ ရရှိခဲ့သည်ဟုဆို၏။
99.7% သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအရှုံးပြလေသည်။
Newsweek အလိုအရတော့ 1% ထက်နည်းသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသာ အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ထွန်းသည် ဟု ဖော်ပြ
အချို့ MLMများ အမှန်တကယ် Product ထုတ်ကုန် ရှိ၏။ အချို့မူ မရှိ။ အနှီ မရှိသည့် MLMများကို ထပ်မံ သရုပ်ခွဲပါက
အတိုင်းအတာတခုထိ လုံလောက်သော အရင်းအနှီး ရရှိပြီးမှ ထုတ်ကုန် စထုတ်သော(၀ါ) လုပ်ငန်း စတင်လည်ပတ်သော
လုပ်ငန်းများနှင့် ဘာမှ မထုတ် မလုပ်ဘဲ Pilotsများ Co-Pilotsများ သာ အဆီစား၍ အသားမျိုနေသော လုပ်ငန်းအမည်ခံ
များကလည်း မနည်း။ သည်လို လုပ်ငန်းတွေမှာ ၀င်ပါမိရင် ဘာဖြစ်တတ်သနည်း?
မိမိရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသော ငွေရင်းပြန်ရရန် (၀ါ) မိမိကိုယ်တိုင်အညာခံ ထိထားမှန်း သိလျက်နှင့် မိမိငွေရင်းပြန်ရရန်အတွက်
မိမိက လူသစ်များအားလိုက်လံ လိမ်ညာရတော့သတည်း။ Member သစ်တိုးလျင် မည်၍မည်မျှ ပေးမည်။ ရောင်းအား
ဘယ်လောက်ရှိလျင်ဘာခံစားခွင့်ရမည်။ Point systemများ အရ Point ဘယ်လောက်ဆိုလျင် ဘာအဆင့် သတ်မှတ်ပြီး ဘာပေးမည်
ဘယ်ခေါ်သွားလည်ပတ်စေမည် စသော Loyalty schemes များ programmes များမှာ တင်းကြမ်း။
အမှန်အကန် လုပ်ငန်းများကို မဝေဖန်လိုသော်လည်း Market Saturated ဖြစ်လာမည့် အနေအထားကိုတော့ သတိချပ်စေလိုသည်ဟု
အမြန်နည်းနှင့် သူဌေးဖြစ်လိုသူများ၊ အသိအမြင်ဗဟုသုတနည်းပါးပြီး နိုင်ငံခြား ဆိုတိုင်း မျက်စိမှိတ်
အထင်ကြီးတတ်သူများ ၊တဖက်သားက ကျလောက်အောင် အပြောကောင်းပါက စိတ်လွယ်တတ်သူများ၊
တိုင်းတပါးဝယ် ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ အလုပ်လုပ်ကိုင်စားသောက်ရကြရရှာသော ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ၏
ပြည်တွင်းမှ အိမ်သူသက်ထားများ၊ ဘယ်သူဘယ်ဝါလည်း ပါတာပဲ ဟုတ်မှာပါလေ
ဟု ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ ရှိတတ်သူများ MLM ၏မာယာများကို အထူး သတိချပ်စေလိုပါကြောင်း။
နိုင်ငံတကာတွင် ငွေကြေးခ၀ါချမှုများ အရှုပ်အထွေးများ ပြဿနာ များ အများဆုံး ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော MLM စနစ်၏ သရုပ်ကို
တတ်စွမ်းသရွေ့ စာစီကုံးလိုက်ရပါတော့ သတည်း။
Panca gunam aham vandami
အခုလိုရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် တစ်ချို.အချက်တွေ သိပ်နားမလည်ဘူးဗျ စိတ်ဝင်စားပေမယ့် အဲဒီလောက် ဥာဏ်မမှီလို.နေမှာ..
“အမြန်နည်းနှင့် သူဌေးဖြစ်လိုသူများ၊ အသိအမြင်ဗဟုသုတနည်းပါးပြီး နိုင်ငံခြား ဆိုတိုင်း မျက်စိမှိတ် အထင်ကြီးတတ်သူများ ၊တဖက်သားက ကျလောက်အောင် အပြောကောင်းပါက စိတ်လွယ်တတ်သူများ၊ တိုင်းတပါးဝယ် ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ အလုပ်လုပ်ကိုင်စားသောက်ရကြရရှာသော ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ၏ ပြည်တွင်းမှ အိမ်သူသက်ထားများ၊ ဘယ်သူဘယ်ဝါလည်း ပါတာပဲ ဟုတ်မှာပါလေဟု ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ ရှိတတ်သူများ MLM ၏မာယာများကို အထူး သတိချပ်စေလိုပါကြောင်း။”
နာပြောတယ် လူကြီးတွေ မျက်စိနောက်အောင် မနေပါနဲ့ ဆိုတာ ကိုး ..
ကျေးကျေးပါ ဆြာရေ . ဒီရက်ပိုင်းတင် အသိ တစ်ယောက်က အသင်းဝင်ဖြစ်အောင် ပစ္စည်းဝယ်ဖို့ ပိုက်ပိုက်လိုလို့။ ပြီးရင် ဘယ်လို ပြန် အကျိုးရှိမယ် လာပြောလို့ ၊ ကြည့်လုပ်ပါ ဘဲ ပြောလိုက်နိုင်တယ် ။ ဆြာ စာ print လုပ်ပြီး ပေးဖတ်လိုက်ဦးမယ်။
သူက ရောဂါ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဘာဆေးဝယ်သောက်ရင် ဘယ်လိုကောင်းတယ် ၊ အသင်းဝင် လည်းဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ဘယ်လို ပြန်ရှာနိုင်တယ်ဆိုပြီး အတော်သက်ဝင်ယုံကြည်နေတာ။
အဲ့အသင်းက ကျုပ် ကို လာသတ်တော့မှာဘဲ …
(စိုးတယ် စိုးမိတယ် စိုးထိတ်မိတော့တယ် ….)
ဒါခညား ရေးသလားလို့ လာမေးလို့ကတော့ ဖင်ပိတ်ငြင်းမှာဂျ
အဲ့လာကြောင့် စာရေးနည်းကိုတောင် ကြိုးစားပမ်းစား ရုပ်ဖျက်ပီးရေးထားရတာ
ကိုယ့်ပထမဆုံး ဗဟုသုတဆောင်းပါး(ရွှေစံချိန်စံနစ်ဆိုရာဝယ်) တုန်းက တော်တော်အခြေအနေဆိုး
ခဲ့တာကွ၊ နားမလည်လို့ဖတ်သူ မန့်သူနည်းခဲ့တာပေါ့ကွာ။
ညီကတော့ မင်းသားဆိုတော့ တမျိုးပေါ့။
စာကိုမန့်ရရင်တော့ MLM ထက် MNCs တွေကိုပိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကွာ။
ခုတလော MNC တွေဝင်ဖို့ အသံတွေ သိပ်ကျယ်နေတယ် အစ်ကို ရေ့
ပြည်တွင်းက ဆြာကြီးဆြာမကြီးတွေလည်း local SMEs တွေ
ဂန့်သွားမှာ တွေးပူနေကြတယ် ဖတ်ဖူးတာပဲ …
တချို့SMEsတွေကတော့ ဆြာတွေ ပူတတ်ရန်ကော ထင်ကောင်းနေတုန်း..
ပညာရှင်တွေ စားပေါက်ထွင်တယ် တွေးတုန်း ……
MNCs တွေကို က အစ်ကိုရေးဖို့ ညီချန်ထားပါသည်ခင်ဗျား…
အစ်ကိုစ လိုက်ပါဗျာ ညီ တတ်သလောက် မှတ်သလောက် catch-ball လုပ်ပါ့မယ် …
စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာ “ရေးချင်” တာဟုတ်ဘူး။
ဟဲ ဟဲ စိတ် ဝင်စားတာ။
ခေါင်းစဉ်ကိုပဲ ဖတ်ပြီး ဆင့်ပွား မားကက်တင်း ကောင်းကြောင်း ပြောတယ် မှတ်လို့ ကျော်ဖတ်သွားတော့မလို့…။ ထောက်ခံပါတယ် နက်ဝက်ခ် မားကက်တင်းစနစ်သည် သိပ်မအောင်မြင်ပါဘူး။ နောက်ပြီးတော့ သိပ်လည်း ကျင့်ဝတ်နဲ့ မကိုက်ညီဘူး။ မားကက်တင်း ဗျူဟာနဲ့ဆို push strategy ဖက်ရောက် မလားမသိဘူး။ ကုမ္မဏီက ဈေးကွက် အသုံးစရိတ် မတတ်နိုင်လို့ ကော်မရှင်များများပေး လူရှာတာများတယ်။ အကောင်ကြီးများ ဒီနည်းကို မသုံးပါဘူး။ အဖွဲ့ဝင်ဆွယ်ကထဲက မောင်မောင်ဂီပြောသလို တရာမှာ တယောက်လောက် အောင်မြင်တာကို ညွှန်းပြီးလုပ်နေကထဲက မှားနေပြီ။ အိမ်မြေအကျိုးဆောင် လောကမှာတော့ လက်လှမ်းမှီရာ စပ်တူကွန်ယက်ချိတ်ပြီး အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ အရောင်းအဝယ် တန်ဖိုးကလည်းကြီး၊ အချိန်ကလည်း ယူရတော့ သူတို့အတွက်တော့ အကျိုးရှိတယ်။ သို့သော် လူသုံး၊ အိမ်သုံး၊ ဆေးဝါး ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်တွေမှာပါ သုံးဖို့ကြိုးစားလာတော့ ရှုပ်ကုန်တယ်။ အစကနဦးတော့ အချင်းချင်း ပါးစပ်ပြောနဲ့ အောင်မြင်ပေမဲ့ ရေရှည်မှာ အလုပ်ဖြစ်တာနည်းတယ်။ သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ တည်ရှိနေမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ တကယ့်ဈေးကွက် ဗျူဟာတခုအဖြစ်တော့ ရပ်တည်နေနိုင်မယ် မထင်ဘူး။။။။
ကိုယ်လိုရာစွဲပြီး ပေါက်ပန်း၄၀ ရေးတတ်တဲ့အထဲ
တားတားက ဂျာပွန် ဇိမ်ဘုန်းကြီးမှ မဟုတ်တာကိုး နော..
အင်းကိုကြောင်ကြီး ကိုကြောင်ကြီး ခင်ဗျားပြောတဲ့” သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ တည်ရှိနေမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ တကယ့်ဈေးကွက် ဗျူဟာတခုအဖြစ်တော့ ရပ်တည်နေနိုင်မယ် မထင်ဘူး။။။။” ဆို၇င်တော့ လေ့လာလိုက်ပါဦး ဟီးဟီး ..
အဓိက ကတော့ အခြေခံ ဖြန်.ချီတဲ့ ပစ်စည်းပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်..
Comment မပေးခင် အ၇င်ဆုံး ဂဂဏဏ လေ့လာစေချင်သဗျာ..
ဆ၇ာလုပ်တယ်လို. မထင်စေချင်ပါဘူး.. တစ်ချို. American Products တွေဟာ တ၇ားဝင်လာလို.မ၇သေးတာကို သိစေချင်တယ်.. ကိုယ်နိူင်ငံရဲ့ အနေအထားအ၇ ဖြစ်နေကြုံနေတာတွေကို ချည်းပဲ အခြေခံပြီး မမန်.စေချင်ဘူးဗျာ..
ဟယ်လို ကစ်သို …(ဟယ်လိုကစ်တီ မဟုတ်ပါ)
ခြေလှမ်းတွေနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ဆြာသစ် မန့်သွားတာ Strategic Planning ကိစ္စ ခင်ဗျ….
Strategic Gap နဲ့ Strategic Grip ကို လွယ်လွယ်နဲ့ တိုတိုလေး ဗမာလို ရေးသွားတာ အလွန် လှတယ်ခင်ဗျား
စူပါစီအီးအို တွေကိစ္စကတော့ Strategic Breakpoint ပါပဲခင်ဗျား …
တသက်လုံး လုပ်စားလာတဲ့ Strategy တွေ ခေတ်ပြောင်းသွားလို့ လုပ်စားမရတော့တာ
ဆြာက တော့ PESTAL ကို လှလှလေး ရေးသွား ပြန်ပြီ ကိုသစ်ရယ်…
Marketing Environment ကြီး ကတော့ ပြောမဆုံးပေါင်ပဲ ဗျို့…
local က marketing environment ကြီးကတော့ …ဆြာ့စကားငှားပြောရရင်…
အားလုံးကိုယ်စီ တာဝန်ရှိပါသည်ပေါ့ဗျာ …..
ဆြာ မန့်မှာ စောင့်နေရင်း
မန့်မယ့်မန့်တော့လည်း ရှယ် ပါပဲလားဗျာ…..
Here USANA and Amway are the strongest two MLN, i have been approached this evening bya17 years old from one of these company (Indeed, at least i countered onceamonth, some come and sell insurance, even energy drink). I had seenalot of my friends (at least 5) failed to keep doing on this kinda industry. Same as their counterparts in Asia, Most members in recruiting level running here are also risking their moral law and being fooled by their recruiter.
အဲဒါကို.. လွန်ခဲ့တဲ့..အနှစ်၂၀လောက်ကထဲက..အင်မတန်ကြိုက်လို့.. အထပ်ထပ်တွေးပြီး..ဘစ်ဇနက်မိုဒယ် အသစ်တခုလုပ်မလို့ကြံဖူးတယ်..။
ပြီတော့.. ယူအက်စ်ရောက်ောတ့ .. အယ်လ်အေရဲ့ နာမယ်ကြီးရှေ့နေရုံးသွား.. အိုင်ဒီယာကို မှတ်ပုံတင်တာ.. ဒေါ်လှ၂သောင်းလောက်တောင်းတာနဲ့.. ပြန်လစ်လာခဲ့တာ.။
အဲဒီတုံးက တွေးခဲ့တာက… အခု.. ဂိုဂယ်ရဲ့..Adsense Adwords နဲ့အင်မတန်နီးစပ်တဲ့..ပုံစံတခုပါပဲ..။
ဂီဂီလည်း.. အဲဒါကိုအခြေခံပြီး.. အသစ်လေးချရေးကြည့်ပါလား…ဟင်င်င်။
အနည်းဆုံးတော့. မြန်မာတွေရဲ့….ငွေချေးတဲ့ စံနစ်ထဲရောသမမွှေကြည့်ပါလား…။
အင်း ….. လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ကတည်းကတောင် MLM ထောင်ပီး လူတကာ လိမ်ညာစားဖို့ကြံပါသတဲ့….
Google AdWords ဆွဲထည့်ရပြန်ဘီ …….(ဂူးဂဲလ် ကြီးကတောင် သူ့အိုင်ဒီယာကို ၁၅နှစ်လောက် နောက်ကျ
ပီးမှ ရှာဖွေဖော်ထုတ် တွေ့ရှိသွားကြောင်းက လည်း ကြွားလိုက်သေး. …ဟွန်း…)
အသစ်ချရေးတဲ့ …အဲ့ဒါ လည်ပင်း ကြိုးကွင်းစွပ်တာ ….
ရေးခိုင်းတာ ..အားမရသေး …. ငွေချေးတဲ့ စနစ်နဲ့ ရောသမ ပါလားတဲ့ …
ရက်စက်ထှာ သဂျီး …
ကောင်းဘီ ရေးမယ်ဗျာ … ရေးပီးရင် သဂျီးကို copyright ပေးမယ် ….
ဘစ်ဇနက် မော်ဒယ်ဆိုတော့ (သဂျီး မီလျံ ဘစ်ဇနက် လုပ်စားလို့ရသွားမယ် …
road-mapဖြစ်နေလေတော့)စာမူအ အရင်လာထားဘဲ …..ဟွန့်….
တခေတ်က ကဗျာ ဆြာ တွေ ကြွေးကျော် သလို ကြွေးကျော်လိုက်မယ် ….
(၁သောင်းဆိုသည်မှာ အစိမ်း ကိုဆိုလိုပါသည် ။ ဤကား စကားချပ်)
ကျုပ် မိန်းမ တို့ ကုမ်ပဏီ က အခုဇာဒူးကြီးရေးတဲ့ မာတီလယ်ဗယ်မာကတ်တင်း ဘဲဗျို့ 
မန်ဘာတွေ အများကြီး နဲ့ ခိုင်းစားနေတာ ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတာပါဘဲ ။
ဘက်စုံထူးချွန်ထက်မြက် လှသော ဇာဒူးကြီး ကျေးဇူးကြောင့်
မိန်းမ ကို ဖတ်ခိုင်းစရာ စာတစ်ပုဒ် ရသွားဘီ
အင်း … ကျုပ်ကို သတ်ချင်မယ့် အဖွဲ့ အစည်း တခု တိုးသွားကြောင်း အား
လွန်စွာမှ စိတ်မကောင်း စွာဖြင့် ဖတ်ရှုမိလိုက်ပါသည်
ကိုဇာဂီေ၇.. ခင်ဗျားေ၇းထားတာ ဗဟုသုတတော်တော်၇ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..
့သူဌေးဖြစ်ဖို.ဆိုတာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်နေ၇ာပဲဖြစ်ဖြစ် မလွယ်ပါဘူးဗျာ
တစ်ခုခု၇ဖို.ဆိုတာ တစ်ခုခုတော့ ပေးဆပ်၇စမြဲပါပဲ
ဒါကြောင့် ကြိုးစားမှု၊ ဇွဲမလျှော့မှု၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု စတာတွေမပါ၇င် အလကားပါပဲ
MLM ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူများလခစားပဲ ဖြစ်ဖြစ် မကြိုးစား၇င် ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဘယ်ဟာမဆို ကောင်းကွက်ဆိုးကွက်တွေ ရှိကြပါတယ်. အဆိုးဘက်ကိုများပြီး အကောင်းဘက်နည်းချင်နည်းမယ် ၊ အကောင်းဘက်များတဲ့ဟာလည်းရှိမှာပေါ့ဗျာ.
အခြေအနေအ၇ မတွေ.ဖူး မကြုံဖူးသေးလို.ပါ။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အနေအထားအ၇ အင်တွေများနေ၇တာပါ။
အနာဂါတ်မှာ ပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန် MLM ကို based လုပ်ထားတဲ့ နာမည်ကြီး Product တွေ မြန်မာပြည်ေ၇ာက်လာဦးမှာပါ။ ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန်သမားတွေ အတွက်တော့ တစ်ချို. Product တွေရှိနေဦးမယ် ထင်ပါတယ်ဗျာ။
ကျေးဇူးပါ ဆဂီ ဒါမျိုးလေး မျှော်လင့်နေတာပါ… ကျွန်တော်လဲ MLM ကိုထောက်ခံတဲ့အထဲမပါပါဘူး… ဘယ်လောက်ပဲ မျှတအောင် အကျိုးခံစားခွင့်တွေကို plan အမျိုးမျိုးဆွဲပြထားတယ်ပြောပြော… ကုတ်သွေးစုတ်သလိုကြီးပဲမြင်မြင်မိနေလို့ပါ…
ဒီ အခုမြန်မာနိုင်ငံက MLM နဲပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်သိပ်အစာမကြေ ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ဖြစ်တဲ့ သူ့ ပစ္စည်းတွေရောင်းပုံ.. ဈေးကြီးပုံ.. လူအတန်းအစား လူဦးရေမကိုက်ညီပုံတွေ.. ထိပ်ပိုင်းလူအနဲစုလောက်ပဲ နင့်နေအောင်ရပြီး… တစ်နေ့ ဒီလူဒီလူတွေလိုဖြစ်မယ်ဆိုပြီး ဆွယ်လုံးတွေကို ယုံရခက်မယုံရခက်ဖြစ်နေတဲ့ ဒွိဟတွေ ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင် တစ်ကန့်ချင်းချပြသွားလို့ ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်…
အကြောင်းအရာလောက်တင် ကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး.. စာအရေးအသားကလဲ လက်ဖျားခါလောက်အောင်ကောင်းပါတယ်… ဒီတစ်မျိုးထဲကောင်းတယ်ဆိုတာထက်… ပုံစံကွဲတွေခွဲပြီးရေးနိုင်တာကို လေးစားတာပါ…
ဒါထက်.. တစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ ခင်ဗျ..
Network marketing နဲ့multilevel marketing ကိုမတူဘူးဒီက မားကတ်တင်းဆရာတစ်ချို့ ပြောလို့ ခင်ဗျ… နဲနဲရှင်းပြပေးပါလား… ဆဂီ…
သဂျီး ချစ်ချစ် ဒေါ်ဝီကီ ရဲ့ အလိုအရတော့ MLM ကို နာမည်ခွဲတွေ အနေနဲ့ pyramid selling, network marketing,
referral marketing လို့ ခေါ်ပါသတဲ့ …
သည်တော့ကာ သည်ဆြာတွေ သည်လိုပြောတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ၂ခုရှိတယ်ဗျ။
၁။ မော်ဒယ် ကွဲတွေရှိတာ ….
ကျနော် ရေးတဲ့ထဲမှာကို 8-balls & 1head-6legs ၂ခုပါသွားပြီကိုး … တခြား ပုံစံကွဲတွေ အများကြီး ရှိသေးတယ်ဗျ
သည်တော့ မတူညီဘူး ဆိုတဲ့ စကားသည် identical မဖြစ်ဘူး လို့ ပြောတာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် similar တော့
ဖြစ်နေသေးတယ်နော ။ (ကျုပ်တို့ ဗမာစကားများ ရှုပ်ထှာ …) ဒါကို ဆိုလိုချင်သလား မသိ..
ဥပမာဗျာ ၀တုတ်မ ကန်ပနီလီမိတက်၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို မူရင်းကန်ပနီထံမှ တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း
မိတ်ဘက် ကန်ပနီများဖြစ်သောဘုတ်ဆုံမ ကန်ပနီ နှင့် မဘုတ်ဆုံ ကန်ပနီတို့ ဆီမှ ၀ယ်ယူ အားပေးနိုင်ပါသည်
လို့ ဆိုထားတယ် ဆိုပါစို့…
တခြား လုပ်ငန်းခြင်းဆင်တဲ့ ကန်ပနီတွေဖြစ်တဲ့ ပိန်တာရိုး ကန်ပနီ၊ ပလွေရိုး ကန်ပနီတွေ ကို
ပေးမဖြန့်ခိုင်းဘူး …. ပစ္စည်း ယူတင်ခွင့် မပေးဘူးဆိုရင်…..
ဒါဟာ Closed-Groupလို့ ဆိုနိုင်တယ်ဗျ …(MLM နဲ့ ကွာတဲ့အချက်က မန်ဘာအသစ်မမွေးဘူး …သူ့ အုပ်စု
နဲ့သူ သီးခြား ရပ်တယ်တယ်ပေါ့… )
သည်တော့ကာ သူတို့ကို Network ပြုလုပ်ဖြန့်ချိ တယ်လို့ ဆိုမယ်ဆို ဆိုလို့ရလောက်တယ်ဗျ…..
အုပ်စုဖွဲ့ ဖြန့်ချိတာမျိုးကိုး …သည်တော့ သည် Network က လုပ်တဲ့ marketing strategy ကို
Network Marketing လို့ ခေါ်ရင် ခေါ်လို့ရသွားပြီမဟုတ်လား ….
အော် အင်းဂလိစာနှယ့် Network ဆိုတဲ့ စကားရဲ့ အသုံးအနှုံးက အလွန်ကျယ်ပြန့်ပြီး အလွန် ယေဘူယျ
အကောင်းဆုံးက အဲ့သည့်ဆြာတွေကို ပြန်မေးကြည့်ပါခင်ဗျား …
ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ ဘာကိုမတူဘူးပြောပါသလဲ ….ဆိုတာကို ….
သူတို့ ကျနော့်ထက် အများကြီး ပို သိမှာ တတ်မှာ သေချာပါတယ်…
(ကျနော့် ဆြာသမားတွေများတောင် ဖြစ်နေမလားဘဲ…)
ပြီးရင် ကျနော် လည်း သင်ယူချင်လို့ reply လေးတော့ ပြန်မန့်ခဲ့ပါဗျ…
လက်တလော ကျနော်ကတော့ lost in translation ဖြစ်နေကြောင်းပါ
မြန်မာပြည်မှာ.. အာမခံစံနစ်သေချာလုပ်ဖို့လိုနေပြီ ထင်မိတယ်..။
ဆိုတော့.. ပြောလည်း ဘယ်သူမှမလုပ်တဲ့အတူတူ.. ကျုပ်ပဲလုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်..။
ရွာထဲက.. ပွိုင့်၅သောင်းအထက်ရှိသူ မြန်မာပြည်တွင်းက.. ရွာသူားတွေကို.. ကားနဲ့ပါတ်သက်တဲ့.. အာမခံရောင်းမယ်..။
ဘတ်စ်ကားကြောင့်.. လူမှာမတော်တဆမှုတခုခုဖြစ်ရင်.. အသုံးပြုဆေးစရိတ် ဒေါ်လာ ၁၅၀ ချက်ချင်းထုတ်ပေးမယ်..။
ခိုင်မာမှုအတွက်.. ရဲစခန်းနဲ့..ဆေးခန်းထောက်ခံချက်ရယ်.. ရွာသူား ၂ယောက်ထောက်ခံချက်ရယ်…ပြရမယ်.။
အဲဒီအတွက်.. တနှစ် ပွိုင့်၅သောင်း ပရီမီယံကြေး ကြိုသွင်းပေးရမယ်..။
အဲဒီဘစ်ဇနက်မိုဒယ်လေး မွန်းမံကြည့်မလား…။ MLM လေးထည့်ရောသမမွှေကြည့်လိုက်လေ…။
နော်တို့ပြည်ဝယ် ထိုထိုစနစ်ကို အသက်သွင်းနေကြ၏။
စိတ်ဝင်စားကြ၏။ ဝင်ပါကြ၏ ။ ပြန်ရှာကြ၏။ (မိမိရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသော ငွေရင်းပြန်ရရန် (၀ါ) မိမိကိုယ်တိုင်အညာခံ ထိထားမှန်း သိလျက်နှင့် မိမိငွေရင်းပြန်ရရန်အတွက် မိမိက လူသစ်များအားလိုက်လံ လိမ်ညာရတော့သတည်း။ )
MNC အကြောင်း လည်း ရေးစေလိုပါတယ် ..
ကလိကလိနဲ့ အဖြေရှာနေမိတဲ့ အရာပါ။
အခုမှ ရှင်းခနဲ လင်းခနဲ ဖြစ်သွားတော့တယ်
သေသေချာချာ စေ့စေ့စပ်စပ် နားလည်အောင် ရေးပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။
ဘဂျီးသူကြီး လမ်းညွှန်ပေးလို့ ဒီအိမ်ထဲရောက်လာခွင့်ရခဲ့တာပါ…….
ကိုဂီး ကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်သလို လမ်းညွှန်ပေးတဲ့ သူကြီးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်လှပါ၏…
ကျုပ်လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကို အရင်က စဉ်းစားထဲ့ဖူးပါတယ်… ဒါပေမယ့်….
အဖြေမထွက်ခဲ့ပါဘူး….. အခုဒီပို့လေးကို ဖတ်ပီးမှပဲ အတော်လေး နားရေလည်လာပါပီ….
သူငယ်ချင်းက ခေါ်လို့ ပါသွားသေးတယ် သူနဲ့တူတူ (double crane တဲ့) …သူကတော့ ခုထိ အင်တိုက်အားတိုက်လုပ်နေတုန်းပဲ …ဒိုင်းမွန်းဖြစ်ဖို့ဆိုလား..ကိုယ်ကတော့ သူရောင်းတာပဲ ၀ယ်သုံးဖြစ်တာပါ..ဈေးကလည်းကြိးတော့ ရေရှည်မသုံးဖြစ်ပါဘူး..ေိခိ..
သူတို့ဆေးတွေသုံးမှ ဒီရောဂါပျောက်မှာလားပေါ့..ကိုယ့်နိုင်ငံကထုတ်တဲ့ဆေးလည်း ဈေးသက်သာစွာနဲ့သုံးလို့ရတာပဲလေ.. ပြီးတော့ ကိုယ်တွေက အဲ့လောက်လည်း အပင်ပန်းမခံနိုင်တာရယ် သူများကို အပြောကောင်းကောင်းနဲ့ မဆွယ်တတ်တာလည်း ပါပါတယ်…သူတို့က တော်ကီကောင်းမှလေ..ဟုတ်တယ်ဟုတ်…
ခုချိန်ထိ … တချို့ တချို့သော MLM တွေ ခေါင်းထောင်နေသေးတာ …
တချို့ ..MLM ရဲ့ ခြေလှမ်းတွေထဲမှာ ..သိပ်ကို ရက်စက်တဲ့… အခင်းအကျင်းတွေပါနေတယ်…
အဲ့ဒါကတော့.. တိုင်းရင်းဆေး Vs အင်္ဂလိပ်ဆေး ဆိုတဲ့ အကွက်ပါပဲ …
နိုင်ငံတိုင်းမှာ တိုင်းရင်းဆေးရှိပါတယ်. ..ကောင်းတာဆိုးတာ မှန်တာမှားတာ ထား …
သိပ္ပံနည်းကျ သက်သေမပြရသေးတာတွေလည်း တပုံကြီး ရှိနေတာပါ … (ဒါက အကွက် ဖြစ်နေတယ်..ဆိုပါတော့..)
ကမ္ဘာ့နာမည်ကြီး နိုင်ငံတခုရဲ့ … ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ ..ဓါတ်ခွဲခန်းတခုကနေ စမ်းသပ်အဖြေထုတ်ချက် ဆိုတာမျိုးလုပ်ပြီးတော့
ဒါက ကင်ဆာတောင်ပျောက်တယ် …. အေကိုက်တာလောက်တော့ အေးဆေး … ပိုလှလာမယ်.. အသက်ပိုငယ်တယ်ထင်ရတယ်.. ဆိုတာမျိုး ချိုးလာခဲ့ကြတာ ကို ဆိုလိုပါတယ်…
(ပြောဖူးပါတယ်.. ဆေးဝါး နဲ့ အလှကုန်ကြားက ကုန်ပစ္စည်းမျိုးတွေ ဆိုပါတော့…
ခုတလော ..ပြသနာ ပွေနေတဲ့ MLM တခု အကြောင်းတော့ …တချိန်မှ ရေးပြပါ့မယ်… P.S)
ဆိုတော့ အကြံပေးချင်တာက …MLM နဲ့တွေ့ရင် … ၂ခုပဲ မေးကြည့်ပါလား..
၁).. စီးပွားရေးလောကသမိုင်းမှာ ခေတ်အဆက်ဆက် နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ .. MLM စနစ်ကိုမှ ဘာကြောင့် ရွေးချယ်ခဲ့တာတုန်း ဆိုပြီး….
(လူရင်းမှတ်လို့ …ဘယ်လို အကျိုး ရှိစေချင်လို့ ..ဘယ်လို ဂွင်မို့လို့ ဆိုတဲ့ …တော်ကီတွေ ကြားရမယ်ပဲ မှတ်ပါတယ်…)
၂)… ဘာလို့ သဘာဝကျကျ ပုံမှန် ..ဖြန့်ချိရေးလမ်းကြောင်း နဲ့ ကြော်ငြာအား ကိုသုံးပြီး ဘာကြောင့် မဖြန့်ချိ ရသလဲ ဆိုပြီး မေးကြည့်ပါလား …။
(အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေ အကုန် ထပ်မံထွက်ကျလာအုံးမယ်ထင်ပါတယ်…)
MLM ရဲ့ အချို့အဆင့်တွေမှာ ..မန်ဘာဝင်ပြီး ဖြစ်သူတွေက အခြေအနေမှန်ကို သိသွားတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကိုကြုံရတယ်ဗျ..
(သို့သော်သူ လွန်ခဲ့ပြီ ကျွံခဲ့ပြီမို့ … မနှုတ်နိုင်တော့…)
ကိုယ် အညာခံရတာသိတယ်… သို့သော် ကိုယ့်အရင်းကိုယ် ပြန်ရဖို့အတွက်
ကိုယ့်အောက်မှာ လူရှိဖို့အတွက် …ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လူသစ်တွေကိုပြန်ညာရမယ် ဆိုတာ ..မျိုးပေါ့…
MLM ရဲ့ မက်လုံးတွေထဲမယ်.. နက်ဖြန်သဘက် လန်ခရူဇာ စီးရမယ် ဆိုတာမျိုး…
တလကို ထိုင်နေရင်း သိန်း ထောင်ဂဏန်း ရာဂဏန်းချီပြီး ပက်ဆံထိုင်ရေနေရုံပဲ ဆိုတာမျိုး …
ပြောတတ်ကြတယ်ဗျ…. အခွန် တို့ ..တည်ဆဲဥပဒေတို့ …နောက်ဆုံးဗျာ … ဗဟိုရဲ့ တစ်လတာ ပစ္စည်းဖြုန်းအား
အမြတ် နဲ့ အခွန်စာရင်း.. ကန်ပနီရဲ့ နှစ်ချုပ် စာရင်းရှင်းတမ်း ..ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ့မှု ဇယား နဲ့ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ တည်ဆောက်ပုံလူစာရင်း
အဲ့ဒါတွေ တောင်းကြည့်ပါလားး.. လို့ ပြောချင်ပါတယ်…
ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့တိုင်းပြည်မို့ … ဘယ်နိုင်ငံက ဘယ်ကန်ပနီကြီး ဟ- ဆိုရင် ..
ယုံမှားတတ်တာ… ဟုတ်မှာပါလေ ထင်တတ်တာ … ဖြတ်လမ်းကနေ ကြီးပွားချင်တာ(အပြစ်တင်တာမဟုတ်ပါဘူး လူပီသမှုကိုပြောချင်တာ)
အဲ့သည့် အားနည်းချက် …အဲ့သည့် ဟာကွက်တွေအပေါ် … အမြတ်ထုတ်ချင်တဲ့ ..ဂုတ်သွေးစုတ်ချင်တဲ့ …
အညာခံရသူချင်းချင်းတောင် ကိုယ့်အရင်းကိုယ် ရအောင် ကိုယ့်ဆက် ပီး ဦးနှောက်ဆေးပေးရမယ့် …
ဟင်္သာကိုးသောင်း ကိစ္စရပ်မျိုး လို့ ယူဆ တွေးမြင်မိလို့ သည်စာကိုရေးပါတယ်ဗျား ..
ဂူးဂယ်ကနေ mlm ဆိုတာ ဆိုပြီး ရိုက်ထည့်ရှာလိုက်တာ ဒို့တွေရွာက ပိုစ့်တွေ့လို့ ၀င်ဖတ်ရင်း ရှယ်ဖို့ပါယူသွားတယ်နော်…
.. ဖေ့ဘွတ်မှာ သူငယ်ချင်းရှယ်ထားတဲ့ဟာ ကောင်းလို့ဖတ်နေရင်း နောက်ဆုံး source ကို credit ပေးထားတာနှိပ်လိုက်တော့ ရွာထဲပြန်ရောက်လာပြီး ကိုယ့်ဆရာရေးထားတဲ့ဟာဖြစ်နေရော..
ခုနောက်ပိုင်း ဖဘ ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးလာတော့
MLM လည်း ဒီပေါ်ရောက်လာပြန်ပြီ
ဘာလို့များ ဒီစနစ်ဟာ နည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီး ပြန်ပြန်ထွက်လာတယ်မသိ
အိုက် MLM ခေတ်စားလွန်းလို့ ကိုယ့်အနီးနားက လူတွေတောင် ယောင်လည်လည်နဲ့ တစ်သိန်းဖိုးဝယ်ရင် မန်ဘာဖြစ်တယ် ၀ယ်ပါလားဆိုပီး အတင်းလာထိုးရောင်းတာတွေကြုံနေရအိ။
ကြော်ညာချက်ကလဲ အိုက်ထဲကတိုင်း တကယ်သာဖြစ်ရင် နတ်ပြည်နဲ့လူ့ပြည်မှားလောက်စရာရှိတယ်
ဆိုတော့ မျက်စိမှိတ်နားပိတ်ပြီး ငြင်းတာတောင် ကိုယ့်ကို ပိန်းလှချည့် ဆိုတဲ့အကျိတွေနဲ့ကျိသွားသေး …လေဘာဒယ်တော်
အဲဒီစနစ်နဲ့ ဆေးကုမ္မ ဏီ နှစ်ခုသုံးခုလောက်သွားနေတာတော့ အဆင်ပြေအောင်မြင်နေတုန်းပါဘဲ ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေ အဲဒီမှာ ပါဝင်နေကြလို့လေ
ဒါပေမယ့် အဲဒီစနစ်က ကုန်ပစ္စည်းတော့ရွေးမယ်ထင်ပါတယ်
မေ့သလောက်ရှိ တခါ အိမ်တံခါး လာလာခေါက်တဲ့ စနစ် ဆိုပါတော့…
အရင်က social network မဖွံ့ဖြိုးသေးတော့ ယုံကြည်မှု ကို အရင်းတည်ပြီး
ဖောက်ခဲ့ကြရတယ်…။ အဲ ..social network ဖွံ့ဖြိုးစ ကာလမှာလည်း …
ဒီစနစ်တွေ မကောင်းကြောင်း သက်သက် သက္ကာရ နဲ့ တကွရော သမိုင်းကြောင်း ကို
တူးဆွပြီးတော့ရော share လုပ်တာတွေများခဲ့တော့ …မလှန်သာခဲ့ဘူး မှတ်ပါတယ်..
ခုလို social network က အတိုင်းတာတခုထိ ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ အခြေအနေ (ခေတ်)မှာ
ဒီဘဲတွေ ပို smart ဖြစ်လာတယ်…။ ပိုပြီး ကြောက်စရာကောင်းလာတယ်…
အဲ့ဒါပါပဲ … ခုတလော ..ခေါင်းပြန်ထောင်လာတာ မြင်မိတယ်ဆိုတာလေး…
ကျနော့် သဘောကတော့ ရှင်းတယ် .. (လောင်းကစားကိုတောင် အဲ့အတွေးနဲ့ ရှောင်တာပါ)
ကိုယ့်မှာ supra natural ability မရှိဘဲနဲ့ supra natural profit/gain မရချင် မလိုချင်ဘူး ဆိုတဲ့
အတွေးပါ…။ ဒီ field မှာ ကိုယ်က သူများ ရဲ့ service/ product ထက် သာနေထူးနေရင်တော့
supra natural price မျိုး တောင်းချင်တောင်းမပေါ့ဗျာ ..ဒါကတပိုင်းပါ …ခုဟာက ….
too good to be believed ပုံပြင်တွေ က သံတူကြောင်းကွဲ နဲ့သာမက (ယနေ့ခေတ်)
အရေခြုံ သူ့လူတပ်သားတွေ ထောက်ခံမှု နဲ့ ပြန်ခေါင်းထောင်တယ်မြင်ပါတယ်..။
လက်တလော သတင်း နည်းနည်းပြန်စုပြီး မြန်မာ့ ၂၀၁၄ MLM ဆိုပြီး ရေးဖို့ ကြိုးစားပါအုံးမယ်ဗျ…။
မြန်​မာမှာ ​တော်​​တော်​ကြီးထွား​နေတဲ့ ဂျိုး၈ျာ​မောင်​နှံ ဆိုတဲ့ ကုန်​ပစည်း ​ရောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့တူ​နေတယ်​။ ကျမ က​တော့သူတို့ကိုမကြိုက်​ဘူး။ ​​ပြောပုံ​တွေက နည်းနည်းပိုလွန်း​နေတယ်​။ သွားတိုက်​​ဆေးတစ်​ဗူးရှိတာနဲ့ ဆရာဝန်​မလို​လောက်​​အောင်​ကိုအဆင်​​ပြေတယ်​။ ဘာဖြစ်​ဖြစ်​သွားတိုက်​​ဆေး​လေးလိမ်းလိုက်​.ဗိုက်​နာ ဗိုက်​​အောင့်​ အကုန်​​ပျောက်​။ သွားတိုက်​​ဆေးက သွားခိုင်မယ်​ ဖြူဝင်းလာမယ်​ အဲ့လိုမဟုတ်​ဘူး။ ဆပ်​ပြာရည်​ကလည်းသီးပင်​စားပင်​​တွေဖျန်းရင်​ ကြီးထွားရှင်​သန်​လာမယ်​ အဟုတ်​။ :-(
အဲ့ဒီလို လုပ်​​နေတဲ့အများစုက နိုင်​ငံရပ်​ခြားမှာ အလုပ်​လုပ်​​နေရင်း နဲ့တွဲလုပ်​​နေတာ။ မီတင်း​တွေက​နေ့တိုင်းလိုလို။ ​ဈေး​ရောင်းတာမဟုတ်​ပါဘူး။ ပစည်း​ကောင်းလို့ရှယ်​တာပါတဲ့။ မ၀ယ်​​တော့လည်း​ပြောတယ်​ အချင်းချင်းအားနာမှုနဲ့​တောင်​အားမ​ပေးတဲ့ လူမှု​ရေးမရှိတဲ့သူတဲ့။
သူတို့​ပြော​နေတာ​တွေ နား​ထောင်​မိ​တော့…တစ်​လဘယ်​​လောက်​၀င်​တယ်​ဆိုတာကြီးပဲ။ ပစည်းအရည်​အ​သွေးထက်​ ကိုယ့်​ဝင်​​ငွေ ပိုရ​အောင်​ လုပ်​​နေကြသလိုပဲ။